I-china Submersible Axial, abakhiqizi be-Flow Pump abahlanganisiwe nabaphakeli | IKAIQUAN
Ipompo Yokugeleza Ehlanganisiwe Engaphansi
Ikakhulu ilungele ukuhanjiswa kwamanzi emadolobheni, amaphrojekthi wokuchezukisa amanzi, izinhlelo zokuhambisa indle zasemadolobheni, amaphrojekthi wokwelashwa kwendle, ukuhambisa amanzi esiteshini samandla, ukuhanjiswa kwamanzi kanye nedreyini, ukudluliswa kwamanzi kwenethiwekhi yamanzi, ukunisela ngenkasa, i-aquaculture, njll.
Iphampu lokugeleza lokuxuba elinamanzi linokusebenza okuphezulu nokusebenza okuhle kwe-cavitation. Ifanele imicimbi enokuguquguquka okukhulu kwezinga lamanzi nezidingo eziphakeme zekhanda. Ikhanda lokusebenzisa lingaphansi kwamamitha angama-20.
Ukugeleza: 460-90000m3 / h
Inhloko: Kuze kube ngu-22m
Izinga Lokushisa Liquid: ＜ 40ºC
PH Inani: 5 ~ 9
Ingahambisa amanzi ahlanzekile nendle encane: kanye nenhlayiya ephezulu yokudlula ayidluli i-100mm
I-ZQHQ Series Submersible Axial, Pumped Flow Pump
I-Axial engaphansi, Kuxubile Fphansi Pump Izinzuzo:
1. Ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu
(1) Ingabe ukuthutha amanzi ahlanzekile namanzi kancane ezingcolile, nge abezindaba lokushisa kuze 40 ℃ futhi PH inani 4-10; Ububanzi obukhulu bezinhlayiya ezidlulayo ngu-100mm.
(2) Izicelo: ukuhlinzekwa ngamanzi emadolobheni, amaphrojekthi okuchezukisa, izinhlelo zokukhucululwa kwendle zasemadolobheni, imisebenzi yokuhlanzwa kwendle, izinhlelo zamapayipi esiteshi samandla, ukuhanjiswa kwamanzi kanye namapayipi edokhi, ukuhanjiswa kwezizinda zamanethiwekhi wamanzi, ukuchelela kanye nokugeleza, i-aquaculture njalonjalo. Ipompo lokugeleza le-axial elicwilisiwe elinokusebenza okuphezulu nokusebenza okuhle kwe-anti-cavitation, zilungele imicimbi enokwehluka okukhulu kwezinga lamanzi nekhanda eliphakeme, ngokuvamile elingaphansi kwama-20m.
2. Ukutshalwa kwezimali okuncane esiteshini sepompo, nokusebenza okulula nokuphathwa
(1) Iphampu isebenza ngaphansi kwamanzi, idinga umsebenzi omncane kakhulu womhlaba nobunjiniyela besakhiwo ekwakheni iziteshi zamaphampu kanye nendawo yokufaka encane. Ngenxa yalokhu, izindleko zokwakha zingancishiswa ngama-30-40%
(2) Ukuhlanganiswa kwezimoto nepompo konga isikhathi nenqubo yokudla esetshenziswayo esetshenziswayo ye-'motor - transmission mechanism - pump axis centering ', ngaleyo ndlela kuletha ukufakwa okulula nokusheshayo esizeni.
(3) Ukuphathwa okulula, nezindleko eziphansi zokuphatha nokusebenza.
(4) Kulula ukusebenza ngokulawula okukude nokuzenzakalelayo.
(5) Umsindo ophansi, ngaphandle kwendawo enamazinga okushisa aphezulu eziteshini zepompo; ukuqinisekisa indawo yokusebenza kahle; iziteshi zamaphampu ezingaphansi komhlaba ngokuphelele zingakhiwa ngokuya ngezidingo, ukuze kugcinwe isitayela semvelo kanye nesici phansi.
(6) Kuyisinqumo esingcono kakhulu ukuxazulula izinkinga zokuvikela izikhukhula zamamotor ezifakwe eziteshini zamaphampu ezisemifuleni nasemachibini ezinokushintshashintsha okukhulu kwezinga lamanzi. Ngaphezu kwalokho, ngokusindisa ama-eksisi amade namabherethi aphakathi phakathi kwemoto nepompo, iyunithi ingasebenza kahle futhi ngokuthembekile.
3.Ukuthembeka okuphezulu, akukho vibration, nomsindo ophansi
(1) Ngemodeli enhle kakhulu yokubacindezela, qinisekisa izidingo zokusebenza zabasebenzisi. Ukushintshana ngamamodeli wendabuko abasebenzisi okufanele bakhethe. Kukhona uchungechunge lwale maphampu, anebanga eliphakeme le-awide, ukusebenza kwezimo zokusebenza ezahlukahlukene, ukusebenza kahle kwamandla aphezulu, nezindleko zokusebenza eziphansi.
(2) Izimpawu zemishini eziphindwe kabili noma kathathu zivimbela ukuvuza. Amabheringi akhethekile agxilwe ngokwanele anokwakheka kwesakhiwo okunengqondo nempilo ende yokusebenza iyamukelwa.
(3) Ngokufakwa kweBanga F, futhi kuza nokuvikelwa kokushisa, ukuqapha, inzwa yokuvuza nezinye izingxenye zokuxwayisa.
(4) Ngezimo ezinhle zokupholisa njengokucwiliswa emanzini, Ukusebenza okuzinzile okunokudlidliza okuncane, nomsindo ophansi.
Ipompo lokugeleza le-axial elingena ngaphansi, ipompo lokugeleza elixubekile lokucwilisa, ukugeleza okuphezulu kwepompo lamanzi.
Langaphambilini Ukugaya Impompo Yendle Engaphansi
Olandelayo: Impompo yendle engaphansi (0.75-7.5Kw)
I-Submersible Axial, Umdwebo Wokwakhiwa Kwempompo Ehlanganisiwe
I-Submersible Axial, Umdwebo We-Flow Pump Spectrum Incazelo kanye Nencazelo
vula ipompo lokucwila kahle
submersible echibini futha
intengo yepompo yokucwilisa
Impompo Yendle Engaphansi
submumpible sump futha
Iphampu Yamanzi Engaphansi
submersible kahle futha